YEYINTNGE(CANADA): Saturday, February 02
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေကော်မတီ ကြိုးစားမည်....
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေကို ထပ်မံ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်အောင်လို့ ပြင်ပက ပညာရှင်တွေကနေ လိုအပ်တာတွေကို ထောက်ပြပေးပြီး အခါအခွင့်သင့်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအောင်ကိုက ဒီကနေ့မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အချို့သော တရားစီရင်ရေးပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ လွမ်းမိုးမှုကို ခံနေတာကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် သိရှိကြောင်းလည်း ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဒီကနေ့မှာ တွေ့ဆုံချိန်မှာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအောင်ကိုက ပြောသွားပါသေးတယ်။
အခုလို ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေ၊ တိုင်းရင်သား အခွင့်အရေးတွေကို ထပ်ဖြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ ရှေ့နေကွန်ရက်ကို အကူအညီပေးဖို့လည်း တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးအောင်ကို က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အခုလို ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေချိန်မှာပဲ တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့တွေဟာ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်တွေက လွမ်းမိုးတာကို မခံရဖို့အတွက်လည်း သူရဦးအောင်ကိုက ထောက်ပြ ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလထဲတုန်းက ကျနော်တို့ ပြည်နယ်တိုင်း တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးတွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ တွေ့တဲ့ အခါမှာ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပိုဆိုးပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တရားစီရင်ရေး လွှမ်းမိုးဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က ပြောတယ်၊ အလွှမ်းမိုး မခံပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်က အလွှမ်းမိုးခံရင်တော့ မသိဘူး။ ဒါ သူတို့က လွှတ်တော်မှာရော၊ သတင်းတွေမှာရော၊ အခြေခံဥပဒေမှာရော ဒါဟာ တိုးတက်တဲ့ မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သုံးနှုန်းထားတာ။”
ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီကလည်း ဆောင်ရွက်နေတာတွေ ရှိပေမဲ့ အချို့သော ပုဒ်မတွေက လူတဦးယောက်ကို အကာအကွယ် ပေးထားတာမျိုးတွေ ရှိနေလို့ အဲဒီပုဒ်မကို 'ဟ' ပေးလိုက်ရင် လွတ်သွားမလားဆိုပြီး မပြင်နိုင်တဲ့ ပုဒ်မတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ သူရဦးအောင်ကိုက ပြောပါတယ်။
တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ နဲ့ ရှေ့နေများကွန်ရက် ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရှေ့နေများ ကွန်ရက်က တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက လက်ရှိတရားရေးလောကမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကို တင်ပြကြပါတယ်။
အဲဒီလို တင်ပြတဲ့အထဲမှာ အစိုးသစ်လက်ထက်မှာ အဆ ၁၀၀ တိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်တဲ့ ရုံးခွန် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ဥပဒေကိစ္စတွေ ပါရှိသလို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄ (ခ) နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် နည်းဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကိုလည်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အဲဒီတော့ အဓိပ္ပါယ်က ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့၊ တံဆိပ်ခေါင်းနှုန်းထားကို အမြင့်ကြီးလုပ်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေကို တရားမစွဲနိုင်အောင် ကန့်သတ်လိုက်တာပဲ။ ဒီ လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကျတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ခွင့်ပြုမှ ကျနော်တို့က စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ရှိတယ်။
တကယ်လို့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ စီတန်းလှည့်လည်ရင် ပုဒ်မ (၁၈) အရ ထောင်တနှစ်၊ ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း ဆိုတော့ ကျနော်တို့ constitutional right၊ နိုင်ငံသားတွေ ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃၅၄(ခ) ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြဌာန်းတဲ့ ငြိမ်း စု စီ ဥပဒေက ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ရာ မရောက်ဘူးလား၊ ညီရဲ့လား။ ကျနော်တို့ အဲဒါကို ပြန်စဉ်းစား သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။”
နိုင်ငံရေး အမှုတွေကို အများဆုံးလိုက်ပြီး စစ်အစိုးရ လက်ထက်က လိုင်စင်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းကလည်း တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ပြိုပျက်ခဲ့ရတာဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေ အပါအ၀င် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ရှေ့နေများကွန်ရက် က တရားရုံးတွေကို အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ နေရာတွေမှာ ပြန်လည်ထားရှိပေးဖို့နဲ့ လက်ရှိ ပုဂ္ဂလိကကို ပေးလိုက်တဲ့ ကမ်းနာလမ်းက ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးကြီးကို ဟိုတယ်ဆောက်ဖို့ လုပ်နေတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတရပ် တင်ပြပေးဖို့ကိုလည်း သူရဦးအောင်ကိုတို့ ကော်မတီကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် ရှေ့နေများကွန်ရက်ဟာ အခုလို ရန်ကုန်မြို့က အထင်ကရ တရားရုံး အဆောက်အဦးတွေကို ပြတိုက်နဲ့ ဟိုတယ်တွေမလုပ်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/02/20130အကြံပြုခြင်း
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် စိန်ခေါ်မှု
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့နားက လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မီတီရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာဖို့ နှောင့်နှေးနေချိန်မှာပဲ လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ လိုလားသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေရဲ့ ဖိအားတွေလည်း တိုးလာနေပါတယ်။
စုံစမ်းမှုတွေကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့ အစိုးရအတွက်သာမက၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မီတီကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်ပါ စိမ်ခေါ်မှု ဖြစ်မယ်လို့ အကဲခတ်တွေက မြင်နေကြတာပါ။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မီတီရဲ့ အစီရင်ခံစာတစောင် ဇန်န၀ါရီလကုန်မှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ ထွက်ပေါ် မလာနိုင်ပဲ ဖြစ်နေရတာပါ။ စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာဦးပိုင် လီမိတက်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာဝမ်ဘောင် ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ ပူးတွဲစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံတွေ လယ်မြေတွေ နစ်နာဆုံးရှုံးရသလို၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်မှုတွေ အကြီးအကျယ် ကြုံခဲ့ရတဲ့နောက် ၂ လအတွင်း အပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ သမ္မတက ညွှန်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေအပါအ၀င် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ လနဲ့ချီ ကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်တွေက သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကွန်ယက်ရဲ့ ဥပဒေရေးရာကော်မီတီက ဦးသိန်းသန်းဦး ကတော့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက မီးလောင်ဗုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး အင်အားသုံး နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ အထောက်အထားတွေကို တွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီဒေသမှာ လုံခြုံရေးတွေကို တင်းကျပ်ထားလိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
“လူတွေကို ဘာမှ မထိဖို့ မကိုင်ဖို့ သတိပေးခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါဟာ ဦးပိုင်လီမိတက်ပိုင်ဖြစ်တယ်၊ ထိလို့မရဘူးဆိုပြီး ပြောတယ်။
နောက်တခုကတော့ လူတွေကို ချောက်ထားတာပါ။”
ရှေ့နေ ကွန်ယက်အနေနဲ့ကတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြနေသူတွေကို အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းဖို့ ဘယ်သူက ညွှန်ကြားသလဲ ဆိုတာကို သိချင်တဲ့ အကြောင်းလည်း သူက ပြောပါတယ်။
သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င် ဆန္ဒပြသူတွေ ဒဏ်ရာတွေ အပြင်းအထန် ရခဲ့ကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သမ္မတက စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော နှိမ်နင်းမှုအတွက်ပါ ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်း စုံစမ်းဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုသာ စစ်ဆေးဖို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တခြားကိစ္စတွေ၊ ကြေးနီထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း ကိစ္စတွေ ဒါတွေအားလုံးဟာ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြသူတွေ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ စမ်းသပ်မှု တခုအဖြစ်နဲ့လည်း အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။”
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိုတော့ အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ စတင်ခဲ့တာမို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ အားနည်းခဲ့တာပါ။ အခုအခါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မီတီရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုထားပေမဲ့၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကတိက၀တ်တွေကို အိမ်ရှင်တိုင်းပြည် အနေနဲ့ လေးစားဖို့ လိုမယ်လို့လည်း ပြောဆိုထားတာပါ။
လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က သုတေသီ Mathieson ကတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်လည်း စမ်းသပ်မှုတခု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူ တဦးအဖြစ်နဲ့ သာမကပါဘူး၊ သူနဲ့အတူ နိုင်ငံရေး အသွေးအရောင်စုံ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း ပါဝင်နေကြတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တယောက် အဖြစ်နဲ့ ဘယ်လောက် ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။”
အကဲခတ် တချို့ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကော်မီတီထဲ ထည့်သွင်းတာဟာ လူလက်ခံအောင် လုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက ပြောခွင့်ရသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း ကတော့ နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ လက်ပံတောင်း ဒေသခံတွေနဲ့ တက်ကြွသူတွေကတော့ စီမံကိန်း အဆုံးသတ်ရေး ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသလို၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးကလည်း မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒီသီတင်းပတ်တွင်း တွေ့ဆုံချိန်မှာ ဖိအားပေး ပြောဆိုတာတွေ ရှိခဲ့တာပါ။
တရုတ်သံရုံးရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သတ္ထုတွင်း ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရုတ်နိုင်ငံက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိတယ် ဆိုရင်လည်း ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ် အမျိုးသားတက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ 
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဆိုးလ် အမျိုးသားတက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ က လက်ခံရယူပါတယ်။
"I am particularly pleased to be in Korea and to learn from the Korean people, because they have been through the same kind of struggles that we have. They have had to struggle against military dictatorship and worked to re-establish democratic government and also to achieve economic success."
"The Koreans, more than perhaps many other peoples in the world, understand what inner conflict means, what divided people means, what it entails, what hardship, what heartbreaks personally as well as nationally. And we are stillapeople divided because not all the ethnic nationalities of Burma have been able to come to an agreement."
"Each group must question what they can do rather than what can the other one do, what can the other groups do. If we will take this responsibility for our own actions, I think we will come to reconciliation quicker."
KIA, နှင့် မြန်မာအစိုးရ တို့ တရုတ်တွင်ဆွေးနွေးမည်ဟုသတင်းထွက်
ကချင် အရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် အတွက် အမေရိကန် ၊အင်္ဂလန် နှင့် UN, EU တို့ ၏ ဖိအားပေးတိုက်တွန်းချက်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ တွင် KIA, နှင့် မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤဆွေးနွေးပွဲ အတွက် တရုတ် (ဘေကျင်း) အိုးရ မှ လည်းကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် များအတွက် တရုတ်အစိုးရ မှ နေပြည်တော်သို့ လေယာဉ် (၁)စီး စေလွတ်ပေးမည် ဟုလည်းသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။(3/2/2013)
ပြည် သူ တွေ အတွက် တော်လှန် ရေး အဓွန့်မရှည် ပါစေ နှင့် 
By Aung Khaing Myint "Saturday, February 2, 2013 at 1:46pm"
‎" လူတို့ အကြိုက် ဆယ်ခါ လိုက်လည်း မလိုက်တခါ ရှိခဲ့ပါ က ကြီးစွ ရန်သူ စွဲမှတ်ယူ၏ "
ထာ ၀ရ တော် လှန် ရေး လုပ် လို ကြ ပါသလား ဟု ပြည်သူ တွေက မေး လာခဲ့ လျှင် တော် လှန် ရေး ကြီး အဓွန့် ရှေပါစေ ဟု အဘယ်သူ မျှ ဖြေကြမည် မထင် ပါ...
စစ်မှန်သော ပန်းတိုင် ရောက် ဖို့ ရန် အတွက် လက်တွေ့ ကြ သော ဖ်ြစ်နိုင်သော တော် လှန် ရေး ဖြတ် လမ်း ရှိခဲ့ သည် ဆို လျှင် .. ရာ နှုံး အဘယ်မျှက ဖြတ် လမ်း မှ ယုံကြည် စွာ လိုက်လျှောက်ရန် ဆန္ဒ ရှိပြီး ရာနုံး အဘယ်မျှသော တော် လှန် ရေး သမား များက ကိုယ် လက် ကိုယ် ချေ ကို ယ့် စိတ် ကြိုက် လုပ် ရ မှ ယုံ မည် လိုက် လျှောက်မည် ဟုဆိုကာ ကြာ လျှင် ကြာပါ စေကွာ ဟု ဆို ကာ မူလ ပုံ မှန် အတိုင်း လမ်း ရှည် မှ သွားလို ကြမည် နည်း...
နောက် တက်လာသော လူသစ် စစ်ဗိုလ် ချုပ်ကြီး များ က ငါ တို့ အလှည့် ရောက် ကာ မှ ဒီမိကရေစီ ပန်းတိုင်ကြီး ရောက် ခဲ့ လျှင် ရှေး က ဗိုလ် ချုပ် ကြီး များ ကဲ့ သို့အာဏာ ရစ် မူး ရန် အခွင့် နှင့်အချိန် မရ လိုက် ကြမည် ငါ တို့ အရေး မပါ အရာ မရောက် ကြတော့ မည် ကို စိုးရိမ် ပြီး ဒီမို ကရေစီ လမ်း ကြောင်း တတ် နိုင်သမျှ နှောင့် နှေး ကြံ့ ကြာ အောင် ဆွဲ ထား လို ကြသော် လည်း ဒီမို ကရေစီ ခေါင်း ဆောင် ကြီး များ တော် လှန်ရေး ခေါင်း ဆောင် ကြီး များ ကတော့ပြည် သူ တို့ ၏ မြေဇာပင် ဘ၀ ကို အမြန်ဆုံး ကယ်တင် လို ကြမည် ပင် ဖြစ် ပါသည်..
ခိုနီ ၊ ခိုပြာ ငှက်တွေ နှင့်ခွပ်ဒေါင်း ၊ ကဒေါင်း ၊ ဇာမဏီ ၊ ဖီးနိပ် စသည့် ငှက် တို့သည် တန် ဘိုး ဂုဏ်ရည် မတူ ညီ ကြသည် ကို အား လုံး သိကြပါ သော် လည်း .. တော် လှန်ရေး ကစား ကွက် နှင့်နိုင် ငံ ရေး ကစား ကွက် သဘောတရားတို့ မတူညီ ပဲ ပရိရယ် ကွဲပြား ကြသည် မှာ လည်း ချက် ထိုး ပွဲ နှင့် ကျား ထိုး ပွဲ ကစားကွက် ကွာသလို မျိုး ခပ် ဆင် ဆင် ပေ လား ဟု လူပြိန်း တွေး တွေး မိ ပြန်ပါသည်..
ဘဲ အုပ် ကတရာ နှစ် ရာ မဗေဒါ က တပင် ထဲ ဆို သည့် အတိတ် ကာ လ များ တွင် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် လူထု ခေါင်းဆောင် ကို လမိုက် ည ကာလများ တွင် လမင်းကြီးကို မျှော်ခဲ့ ကြ သလို တစာ စာ ရေ ငတ်ခဲ့ ကြရ သည့် ခံစား ချက်များ ၊ ခံစား ဖေါ် ခံစား ဖက်များကိုလည်း ပြန်လည် သတိယမိ နေ ပါသည်..
တောင်ဝှေး လဲ လျှင် ဖိုးသူ တော်ထူနိုင် သော် လည်း ဖိုးသူ တော် လဲ လျှင် တောင် ဝှေး ထူး ပေး ရန် မ လွယ် ကူ ကြောင်း နဖူး တွင် အနီစ ပတ် ကာ သံ ရုံး များ ရှေ့ တွင် အော် ခဲ့ ဘူး ကြ သော သူတိုင်း သိ ရှိ ခံစား ခဲ့ ကြ ဘူးပါသည်...
အင်း.....ဒေါ် စု နေရာ မှာ ငါ သာ ဆို ဘာ လုပ် မလဲ ဆို သည် ကို အစား ၀င် တွေး ကြည့်ကိုယ်ချင်းစာ ခံစား ကြည့် တိုင်း ...တိုင်း ပြည် နှင့် လူ မျိုး တို့ ၏ နာ တာ ရှည် ဘ၀ ၊ ငိုချင်း ရှည် ည များ စွာ ၏ အဖြေသည် ထင် သလောက် မလွယ် ကူ မှန်း သိရှိ စိတ် မော ခဲ့ ရ ပြီး ကံ ကောင်း ထောက် မ ၍ အသက် မသေ ၊ ဘ၀ မပျက် ခဲ့ ပဲ ယခု လို တတိယ နိုင်ငံ ရောက် ခဲ့ ရသည် မိမိ ကို မိမိ ပင် အား မလို အား မရ ဖြစ် ခဲ့ ပေါင်း များ လှ ပေ ပြီ...
မိမိ ကိုယ် တိုင် က ရော ဆင်းရဲသား ပြည် သူ တွေ အတွက် ဘယ် လောက် ဘာတွေ လုပ် ပေးနိုင်သလဲ ဆို သည် ကို တွေး ကြည့် ရင်း ပြည် သူ တို့ ၏ လက်တွေ့ ဘ၀နှင့် ဆန္ဒ ကိုဖြည့် ဆည်းပေး နိုင်သော အုပ်တချပ် သဲ တပွင့်မှ ငါ ဟုတ် ပါသေး ရဲ့ လား ပြည် သူ တွေက ရော အသိ အမှတ် ပြု ပါ သေး ရဲ့ လား ဟု သုံးသပ် ခဲ့ ဘူးပါသည်..
မဟာဗျူဟာ ၊ နည်း ဗျူ ဟာ များ အရ မိမိ တို ပါဝင် တည်ရှိ နေ ကြရ သော အခြေ အနေ အရပ် ရပ် ပေါ် မူတည် ၍ နည်း ပရိရယ် ကြွယ်ဝဖို့ လို လိမ္မာ ပါး နပ်ဖို့ ရောက် ရာ နေရာ မှာ ကြ ရာ တာ ၀န် ကျေပွန် ကြဖို့စစ် ကြောင်း ခွဲ ချီတက် ကြသလို ၊ လမ်းကြောင်းခွဲ လုပ်ဆောင် ကြ ဖို့ လိုပါတယ် ၊ ငါနှင့် မတူ ငါ့ ရန် သူ ဟု မသိစိတ် မှ ချက်ချင်း ထကြွ ကာ ၊ ပြန်လည် ချေပ အတိုက် အခံ ရေး ပြော ဆို နိမ့် ချလို သော သဘော.. ထား များ သည် ရန် သူ ထောင် ချောက် အတွင်း သို့ပြန်လည် ၀င် ရောက် နောက် ပြန် ဆွဲ သွားနိုင်ပါသည်။
ရန်သူ လက်ထဲ က လက် နှက် မိမိ လက်ထဲ ရောက် မှ ၊ ရန် သူ လက်ထဲ ကဒါး မိမိ ဆီ ရောက် ဖို့သည် အချို့ သော တိုက်ပွဲ ပုံသန်တန် အခြေ အနေ အခင်း အကျင်း မျိုး တို့ တွင် ရန်သူ ကို အပြီးသတ် အောင် နိုင် ရေး အတွက် မလွဲမသွေ ဖြတ်သန်း ရန်လို သည့် အဆင့် တခု ဖြစ်ပြီး စိတ် လော ၍ မရ ပေ.. တော် လှန် ရေး ခရာတေး အကွက် များ နှင့်နိုင် ငံ ရေး ဂျူဒို အတွက် များ လှုပ်ရှား ပုံ ခြင်း မတူ နိုင် ပေ...လာသမျှ တွေ့ သမျှကို အတိုက် အခံ လုပ်မည့် အစား သူ လာရာ လမ်း အတိုင်း အလိုက်သင့်ဆွဲ ပေး သည့်ဂျူဒိုနည်း ကို သုံးသင် လျှင် သုံး ရ ပေ မည်... သို့ သော် ရန် သူ နှင့် တိုက် ခိုက် နေချိန် အတွင်း တွင် နောက် တိုက် ကွက် က ဘာ ၊ ဘယ် လို လုပ် လိုက် မှာ ပါ ဟု အား လုံး ချ ပြ လို့ မ ရ နိုင် ပါ ..
အချို့ သော နေ ရာ အချို့ သော သူ အချို့ သော အခြေအနေ မျိုး တွင် ထာဝရ ရန် သူ ထာ ၀ ရ မိတ် ဆွေ ဆို တာ မထား သင့်ပဲ ပူး ပေါင်း ပါ ၀င် အား ဖြည် မူ့ ကို ကြို ဆိုသည့်သဘော ၊ ငါးကျင်းဆီ နှင့် ငါးကျင်း ကြော်သည့် သဘော ကို နား လည် နိုင်စွမ်း မရှိ လျှင် မလို အပ် ပဲ အား သုံး သုံး နေ သည့်စစ် မရောက် ခင် မျှား ကုန် ဆိုသလို မျိုး ဖြစ် သွား နိုင် ပါသည်။
သင် ပုံး ချေ ရေး ၊ အမျိုး သား ရင် ကြား စေ့ ရေး ဆို သည့်နည်း ဗျူ ဟာ အစိတ် အပိုင်း အခန်း ကန်ဏ တွင် အာဂါတ ရား များ ၊ က လဲ့ စား ချေလို မူ့အစွယ် များ ပေါ် ပေါက် နေ လျှင် နောက် ကြောင်း ပြန် ဆွဲ လို သော သူ တို့ ကို အား ပေး သလို ဖြစ် သွား နိုင် ပြီး ပန်း တိုင် နှင့် ပို ဝေး သွား နိုင် ပါသည်။ ရန်ငါ စည်း ခွဲခြား သည့် နေရာ တွင် တော် လှန် ရေး ဗျူ ဟာ နှင့်နိုင် ငံ ရေး ပရိ ရယ် မတူ နိုင် ပေ ။
ပြည် သူ တို့ ဆန္ဒ နှင့်ယနေ တိုင်း ပြည် အခြေ အနေ အရပ် ရပ် လို အပ် ချက် များ ကို လည်း ထဲ့ တွက်ဖို့ လိုပါ သည်..
ယနေ့..အမေရိကန် ၊ ကနေဒါ စသည့်နိုင်ငံတွေမှာ လည်း ဒီလို ခရိနီတွေ ရှိ ပါတယ် .. ထို ကုမဏီ များတွင် မြန်မာ များ စွာ လုပ် ကိုင် နေ ပါ သဖြင့် နာမည် ထုတ် ဖေါ် မပြော လို တော့ ပေ ၊ ထို သူ တို့ သည် ပြိုင် ဖက် ပါတီ ကြီး နှစ် ခု စလုံးကို အလှူ ငွေ များ စွာ လူ နေ ကြ ပြီး နိုင် ငံ ရေး ကို စီးပွား ရေး ရင်း နှီး မြုတ် နှံ သကဲ့ သို့လုပ် ဆောင် နေကြ လေ သည် ။ ဒီ အလှူငွေ တွေ ကို ဒီ ပါ တီ က မယူ လျှင် လက် မခံ လျှင် လည်း အခြား ပါ တီ က လက် ခံ ယူ ပြိး ကစား လိုက် လျှင် မိမိ ပါ တီ က မိ အေး နှစ်ခါ နာ ဖြစ် သွား ရုံ မှ အပ အခြား ဘာ အောင် နိုင် အံ နည်း ၊ စိးပွား ရေးသမား က စိးပွား ရေး တွက် တွက် လျှင် နိုင် ငံ ရေး သမားက လည်း နိုင်ငံ ရေး တွက် တွက် ရမည် သာ တည်း၊ အချစ် နှင့် စစ် တွင် မတရားတာ မရှိ ဘူး ဟု ဆို လျှင် နိုင်ငံ ရေး တိုက် ပွဲ တွင် ကြိုက် ဖဲ ပေါ် လာ လျှင် မဆွဲ ပဲ နေမည် လော..
ရှေ့ က ဦးဆောင်တဲ့ သူ ကဦး ဆောင် ၊လုပ်တဲ့ သူက လုပ် ၊ရင်းနှိး ပေးဆပ်တဲ့ သူ က ပေးဆပ် လုပ်နေတဲ့ အချိန် မှာ အချို့ က တော့ တော် လှန် ရေး နိုင် ငံ ရေး လုပ် ဖေါ် ကိုင်ဖက် အနစ် နာ ခံ ဖက် အချင်း ချင်း ကို မိမိတို့ စေခိုင်းထားတဲ့ ဝန်ထမ်း တဦး ကဲ့ သို့ စောင် ကြည့်နေ ပြီး ...ဒီ ကတိ တွေ ၊ ဒါ တွေ ပြော တာ ဖြစ် သလား ၊ ဟို ဟာ ဆုံး ဖြတ် တာ က မှားတယ် ၊ စသည် ဖြင့်အခြင်း ခြင်း အတွင်း ပတိပက္ခ ပုံ သန်တန် မျိုး ထက် ပြင်းထန် သော ဝေ ဖန် တိုက်ခိုက် ပုတ်ခတ် မူ့ မျိုး သည် ဟင်္သာ ကိုးသောင်း ပျက် စီး ကြောင်း ၏ လမ်း စ အစ ပေလော...
ကိုယ် နိုင်ရာ ကျရာ တာဝန် ဖက် က လုပ် နေကြ ချိန် တိုက် ပွဲ မပြီး သေး ခင်တွင် ဆုံး ဖြတ် ဝေဖန် ရန် အချိန် စော ပါ သေးသည်။
မိမိ တို့ နှင့် အတူ မရှိတော လျှင် မယုံ တော့ ပဲ မထောက် ခံ တော့ပဲ မြင့်တက်လာ တဲ့ လူတိုင်းကို ဆွဲချဖို့၊ တိုက်ခိုက် ဖို့ လုပ် နေလို့ တော့မဖြစ်ပေ.
မိမိ ခေါင်း ဆောင် တင်ထားခဲ့ ဘူးသူ တယောက် ယောက် တက် လာလျှင် ပင် ကျန်သူ အား လုံး က ၀ိုင်းဝန်း တော်လှန် ပြီး ၊ တော် လှန် သော အရှိန် ရ လာ လေ လေ တွေ့ သမျှ မိမိ သူငယ် ချင်း လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဖက် ပါ မကျန် တော်လှန်ရင်း ကွဲကြ ပြဲက ဖြစ် လေ... တော်လှန်ရေး သက်ဆိုး ရည်လေ ၊ ပြည်သူ တိုင်းပြည် ဒုက္ခ ရောက် လေ ဖြစ် ပြီးပြည် ပ ရောက် များ အတွင်း မှာ တော့ပို မို ရှုပ်ထွေး လေ ဖြစ် လာ နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တေ် တို့ ဘောလုံး ပွဲကြည့် ကြတဲ့ အခါ မိမိ အား ပေး သည့် အသင်း သို့ မဟုတ် ဘောလုံး သမားကို အား ရ ပါးရ အားပေး ရင်း အား မလို အား မရ ဖြစ်မိတာ ဆဲမိတာ အပြစ်တင်မိတာ ကွင်းဘေး ကပတ်ပြေးနေမိတာ တွေကို ဖြစ် နိုင် သော် လည်း ၊ မိမိ မမေ့ ဖို့ အချက်က တော့တဖက် အသင်း နှင့်အကြိပ် အနယ် ယဉ် ပြိုင် နေရဆဲ အ ချိန် ဖြစ် နေသေးတယ် ဆို တာပါပဲ ၊ အဲ.. မိမိ လောင်း ကြေး ဆုံးသွား မှာ မိမိ ရှုံး သွား မှာ စိုးလို့အား ပေး ပုံ မျိုး နှင့် တော့ မတူ ဘူးပေါ့ရှံး ရှံး နိုင် နိုင် ဒီအသင်းနှင့်ဒီ အားကစား သမားကို ချစ် လို့ မြတ်နိုး လို့အား ပေး ပုံ မျိုး နှင့်နှစ်အုပ် စု ကွဲ သွား နိုင်ပါသည် ။
မိမိ ကိုယ်တိုင် ကွင်း ထဲ ၀င် ကန် ကြည့် မှ အခြေ အနေ အချိန် အခါ အလိုက် အလျှင်းသင့် သလို အရေး ပေါ် ဆုံး ဖြတ် လုပ် ကိုင် သွား ရ ကြောင်း ၊ အား ပေး နေ သည် သရိသတ် ကိုပင် လှည် ကြည့် ရန် အခွင့် အရေး မရ လိုက် ကြောင်း ကိုယ်ချင်းစာ နိုင်လာပါလိမ့် မည်။
ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် ဆိုသည်မှာ သူ့ နေရာမှာဆို ငါ ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုသည့် အတွေမျိုး ၀င်ကြည့် ခြင်းပါ ဖြစ်ပါသည် ။ လူ့ အလို နတ် မလိုက်နိုင် ဆို သည့် စကား ပုံကိုလည်း ကြားဘူး ကြ ပါလိမ့် မည် ။ ဤ သို့ ဆို လျှင် ချီးးမွမ်း ၇ ရက် က့ဲရက် ၇ ရက် ဆို သလို ပဲ ဥပက္ခာ တရား ကို ထား ရ င်း အချိန် ဆိုသည် တရားသူ ကြီး၏ အဆုံ အဖြတ် ကို စောင့် ကြည့် သင့် သည် လော ၊ မွေ မှန် လျှင် တွင်းဝင် ဖြောင့်ြ
က ပါလိမ့် မည် ။
ကျွန်တော် တို့၏ မိခင် တိုင်းသည် ကျွန်တော် တို့ ကို ချစ်သည် မှာ မယုံနိုင်စရာ မရှိသော်လည်း မိမိ သား များ အတွက် ဆုံး ဖြတ်ချက် မှား ခံ သည် များ မပြည့် စုံ ခဲ့ သည် များ ၊ မိမိ မိခင် ကို ပင် အား မလို အား မရ ဖြစ် ခဲ့ ကြ ဘူး သည် များ တွေ့ ကြုံ ခံစား ခဲ့ ကြ ဘူး ပေ လိမ် မည် ။ မိမိ ၏ မိခင် သည် ဖန်ဆင်းရှင် နတ် တပါး ၊ တန်ခိုး ရှင် မဟုတ် သည် ကို သိ နေ ခဲ့ သဖြင့်မိမိ မိ ခင် ရှံးနိမ့် သွား သည့်ဖြစ် ခြင်တာတွေ ၊ မိမိ လို အပ် တာ တွေ မစွမ်း ဆောင် ပေး နိုင် ခဲ့ လျှင် တောင် မှ ရိုးသား စွာ နား လည် နိုင်ပါသည် ။ နိုင် လျှင် ငါ့ ကြက် ရှုံးလျှင် ရိုက်ချက်စား မည် ဆိုသည့်သဘော မှာ သစ္စာ တရား နှင့်လားလား မျှ ဆန့် ကျင် လျှက် ရှိ ပါ သည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲကွဲလျှင် ဘာဖြစ် လာနိုင်သလဲ ၊ အများ စု က တော့ထာ ၀ရ တော် လှန် ရေး မလုပ် ဆောင် လို ကြပါ ၊ ပြန်လည် တည်ဆောက် ရေး ကာ လ အမြန်ဆုံး ရောက်နိုင်လေ နိုင်ငံ ၊ လူမျိုး နှင့် ပြည်သူ တွေ အတွက် အမြန်ကောင်း လေ လေ ပဲ ဖြစ် သည် မဟုတ် ပါလော..
ဒီမိုကရေစီ တောင် ထိပ် သို့ တက် နေကြသော ကျွန်တော် တို့ အား လုံးတွင် မိမိတို့ အထဲ မှ စိတ်ချရသူ တဦး ဦး က တောင်ထိပ် သို့ ကြို ရောက် နေ နှင့် လျှင် မိမိတို့ အား လုံးအတွက် ပို မို ဖြစ် နိုင် ခြေ များလာပါသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက စစ်တိုက်တမ်း ကစား ခဲ့ ကြဘူး စဉ် တွင် .... ( ၁ ) နေရာ ယူ ( ၂ ) အသင့် ပြင် ( ၃ ) မောင်းတင် ( ၄ ) ပြစ်နိုင်ပြီ ဟု ဆို ပြီး ကစား ခဲ့ ကြဘူးပါသည် ။ မိမိ သင့် တော် ရာ ဖြစ် နိုင်ရာ နေ ရာ အသီး သီး တွင် နေယာ ယူ ထား ကြပါ ။ ပြစ် တော့ ဟု ဆို လျှင် အဘယ် နေရာကို ပြစ် ရမည် ကို ကျွန်ုတို့ အား လုံး သိပါသည်..
ဘဲအုပ်က တရာ နှစ်ရာ မဗေဒါ က တပင်ထဲ ဆိုသည် ... ကာလ ၊ ခံစား ချက် များကို လည်း ကျွန်တော် တို့ မေ့ ကြ ဦး မည် မထင် ပါ...
ဦး ဆောင် နေကြ သော တော် လှန် ရေး သမား တို့ သည် ..မိမိ သိ လျှင် ပင် .ပြည်သူ တွေ ထင် ရောင် ထင် မှား ဖြစ် အောင် ဝေ ၀ါး သွား အောင် တော့ မလုပ် သင့် သေး ပေ
ရပ်ကွက်ထဲ တွင် သူခိုးကို မိသောအခါ ဆွမ်းကြီး ၀ိုင်းလောင်းကြသော သူ အုပ် အများ စု နှင့် အတူ ၀င်ရောက် လက်စွမ်း ပြ လို သူ က များတပ် ပါသည် ။ ဘာခိုးတာ လဲ ၊ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ၊တော် ကြပါတော့ ကွာ ဟု ၀င် ရောက့် ဟန့် တား ရဲ သောသူ နည်း ပါးသည် မှာ မိမိ ကို ပြန်လည် ဦး တည် တိုက်ခိုက် လာ မှာကို ကြောက် ကြ သော ကြောင့် ပေလော...
•လူတို့ အကြိုက် ဆယ်ခါ လိုက်လည်း မလိုက်တခါ ရှိခဲ့ပါ က ကြီးစွ ရန်သူ စွဲမှတ်ယူ၏ "
•လူ့ အကြိုက် လိုက် မဆုံး
•သကြားမင်း ကျွဲ ယောင်ဆောင် ပြီး ဆင်းလာလျှင်တောင် မှ ကိုယ်မဲသလေး ဂျိုပြဲ သလေး ဟု ဆို ကြဦး မည် လော
•ကိုယ် မျက်ချေး ကိုယ် မမြင် သူ များ မျက်ချေး သာ မြင်သည် ဆို ကြ ဘူးပါသည်
ပြည် သူ တွေ အတွက် တော်လှန် ရေး အဓွန့်မရှည် ပါစေ နှင့် ဟု ဆန္ဒ ပြုရင်း...
ဖေ့ ဘုတ်များ ၊ blogs များ မှ စု စည်း ၍ ...
Greatly appreciate to Ko Kyaw Moe Aung and Ko Win Tun…………….
E-mail မှလက်ခံ ရရှိသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် မျှဝေ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
by မယ် ပိုး
ဒီနေ့ အင်းလျားလိတ်မှာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ..
"ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှု မရရှိနိုင်ပါ" တဲ့..
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးအား ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန် နှစ်၃၀ စီမံကိန်းရေးဆွဲ တင်ပြနေသည့်အချိ န်တွင် မြို့တော်စည်ပင် အရာရှိ၊ဝန်ထမ်းများအား ထိုသို့တတ်ကြွစွာတွေ့ရစဉ်
အစိုးကိုအကြွေးဆပ်ဖို့ ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားရမယ်ဆိုတုန်းနိုင်ငံတစ်ကာအကြွေးသာဆပ်ရလို့ကတော့ ထမင်းတစ်နပ်မှ မစားရဘဲသေရုံသာရှိတော့မယ်။ အကြွေးတွေလျော်ပေးတဲ့ မောင်မင်းကြီးသားများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နို့မဟုတ်ရင် ငတ်ပြီးသေရမှာ။
နိင်ငံတကာကလည်းအကြွေးတွေရှော်ပေးနေတယ်၊ ဒို့ဂွတ်ဂါးဗန်းမန့်ကြီးကလည်းတောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့ အကြွေးတွေရှော်ပစ်ပေးပါ။
မြောက်ကိုရီးယားက နျူဗုံးစမ်းသပ်မည့် နေရာအကာအရံများ ဖုံးကွယ်
မြောက်ကိုရီးယားက နျူဗုံးစမ်းသပ်မည့် တူးမြောင်းနေရာကို ဂြိုလ်တုမှ မထောက်လှမ်းနိုင်အောင် အကာအရံများ ဖုံးကွယ်ထား
ဆိုးလ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁။
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည် ၎င်း၏နျူကလီယားဗုံး စမ်းသပ် ဖေါက်ခွဲမည့် နေရာတူးမြောင်းသို့ အဝင်တွင် အခြားနိုင်ငံများက ဂြိုလ်တုမှ ထောက်လှမ်း၍ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း မပြုနိုင်အောင် အကာအရံများဖုံးကွယ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သတင်းအေဂျင်စီ ယုံဟပ်က ဖေါ်ပြလိုက်သည်။
တူးမြောင်းဝင်ပေါက်သုံးခုနှင့် အခြားထောက်ပံ့ရေး အဆေက် အဦးများပါ ပါဝင်နေသော ယင်းပန်ဂျီးရီ ဆိုက်နေရာကို အမေရိကန်၊ တောင်ကို ရီးယားနှင့် ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေး များသည် ပြီးခဲ့သောအပတ်က မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှ နျူစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီးနောက် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။
ယုံဟပ်သတင်းအေဂျင်စီ၏ ဖေါ်ပြချက်တွင် တောင်ကိုရီးယား ထိပ်တန်း သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကား၍ “ဆန်းစစ်ချက်က ပြသနေတာက တော့ အဲဒီက တူးမြောင်းဝင်ပေါက်မှာ အမိုးလိုမျိုး အာအရံပိုက်ကွန်တစ်ခု ဖုံးအုပ်ထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ နျူစမ်းသပ်မှုတွေပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် အပြင်က မမြင်အောင် ပြင်ဆင်ထားရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားသည် ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာတွင် ၎င်း၏ဒုံးပျံ စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့က အရေးယူမှုများကို တုန့်ပြန်သည့်အနေနှင့် တတိယအကြိမ်မြောက် နျူစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
မြန်မာအတွက် ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲ တစ်ရပ် ဖြစ်လာမယ့် တရုတ်-မြန်မာရေနံဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း
အခုလာမယ့် မေလမှာဆို အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထဝီဝင်အနေအထားကို ထူးခြားမှုတစ်ခုခု ဖြစ်စေပါတော့မယ်။ ကမ္ဘာ့ တိုက်ကြီးတစ်ခုစာပမာဏရှိတဲ့ တရုတ်ပြည်ဟာ ၎င်းရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းမြို့တွေမှာ အခြေစိုက် ဖေါ်ဆောင် လာခဲ့ရာမှ နိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဘက်ကို အခြေချပါတော့မယ်။ အရှည်အားဖြင့် ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ရှည်တဲ့ တရုတ်-မြန်မာ ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက် လိုင်းဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အနောက် ဘက်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် မြို့ တော်ကူမင်းကို မြန်မာမှတဆင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အထိ သွယ် တန်းကာ တည်ရှိ လာတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအပြင် ရေနံပိုက်လိုင်းကလည်း အဲဒီလမ်းကြောင်း အတိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ရေနံတွေ ပို့ လွှတ်ပါတော့မယ်။ ပိုက်လိုင်းတွေနဲ့အတူ ကားလမ်းနဲ့ ရထားလမ်းတွေကလည်း လိုက်လာပါတော့မယ်။
တရုတ်ဟာ ပထဝီအနေအထားအရ အမေရိကန်လို တစ်ဖက်စီမှာ ပစိဖိတ်နဲ့ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာတွေ တည်ရှိနေပြီး ပင်လယ်ထွက် ပေါက် အတွက် ပူစရာမရှိတဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ တရုတ်ဟာ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုလို့ ဆိုရမယ့် ပင်လယ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုကို မြန်မာထံမှ ရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ အစိုးရရဲ့ အကြံပေးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သူ ဦးသန့်မြင့်ဦး ကတော့ “တရုတ်မှာ ချို့တဲ့နေတာကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ကာလီဖိုးနီးယားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက နောက်ထပ် ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟိုးအတွင်းပိုင်းက ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ပြည်နယ်တွေဆီကို ကုန်စည်ဆက်သွယ် ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ ပါ” လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာရဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ ထူးခြားစွာတည်ရှိမှုကို ၎င်း၏ Where China Meet India စာအုပ်တွင် ရေး သားဖေါ်ပြခဲ့သော ဦးသန့် မြင့်ဦးက တရုတ်-မြန်မာ ရေနံ၊ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းဟာ ပေကျင်းရဲ့ “ပင်လယ်နှစ်ခု ပေါ်လစီ” မှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့ အတူပင် သြဇာကြီးမားတဲ့ ပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ ရောဘတ် ကတ်ပလန်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တတိယအကြီးဆုံးရေပြင်ဖြစ်သော အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ တွင် တည်ရှိရေးတရုတ် တို့ စွမ်းဆောင်မှသာ ယင်းအချက်က တရုတ်တို့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး စစ်အင်အား နိုင်ငံဖြစ်လာမည်လား၊ သို့မဟုတ် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့သာ ထိတွေ့ နေရသည့် ဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံ အဆင့်ဖြင့်သာ ရှိနေမလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောထား ပါတယ်။ ကတ်ပလန်က ၎င်းရဲ့ခန့်မှန်းမှုကို နိုင်ငံခြားရေးရာမဂ္ဂဇင်းကြီး Foreign Affairs မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးအမည် နှစ်ဆယ့်တစ် ရာစုအတွက် ဗဟိုချက်နေရာ-အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ထဲမှာ ကစားရမယ့်ပါဝါ "Center Stage for the 21st Century: Power Plays in the Indian Ocean " ဖြင့်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင်ပဲ အနောက်တိုင်းဟာ မြန်မာကို လူ့အခွင့်အရေး၊ဒီမိုကရေစီ ရှုထောင့်များကသာ ကြည့်ခဲ့တာ ပါ။ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကနေ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့တာ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း လူဦးရေ သန်း ခြောက်ဆယ် ပမာဏရှိတဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် အထူးအရေးကြီးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုကိစ္စကြီးက နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ အချက်တစ် ချက်ဖြစ်တဲ့ အာရှရဲ့ မဟာဗျူဟာအမြောက်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုကို အလုအယက် ဖြစ်နေကြတဲ့ပွဲကြီးကို အမြင်မှုန်ဝါးအောင် လုပ်ထားပါတော့တယ်။
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဒီပိုက်လိုင်းဟာ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲ ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။ ၁၉၉၀နှစ် များ အတွင်းမှာပဲ မြန်မာဟာ ပြင်သစ်တိုတယ် ရေနံကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ပေးတဲ့ ပိုက်လိုင်း ကတဆင့် ထိုင်းဆီကို ၎င်းရဲ့ကမ်းလွန်ဓါတ်ငွေ့ တွေကို စတင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်တို့ဟာ နောက်ထပ် ပိုကြီးတဲ့ လုပ်ကွက်တစ်ခုကိုလည်း ထပ်ရ ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၀၆ မှာတော့ ပေကျင်းဟာ ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု တွေကို ရှုတ်ချကြောင်း ဆုံး ဖြတ်ချက်ကို ဗီတိုအာဏာသုံး ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ ယူနန်ပိုက်လိုင်းစာချုပ်ကို တရုတ်တို့ ရရှိသွားပါတော့တယ်။ အခုလို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဆီ မြန်မာကို ဖြတ်လို့ လမ်းပေါက်သွား တာဟာ အခုရာထူးကအနားယူတော့မယ် သမ္မတ ဟူကျင်တောင် ပြောတဲ့ “တရုတ်ရဲ့မာလက္ကာရေလက်ကြား ပြဿနာ” ကို ဖြေရှင်းဖို့ စတင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ တရုတ်ဟာ ၎င်းတင်သွင်းသမျှ ရေနံ စုစု ပေါင်းရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အခု အချိန်ထိ အမေရိကန်ရေတပ်က ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မလေး ရှားနဲ့ ဆူမတြားကျွန်းတို့ကြားက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အဲဒီ ရေလက် ကြားလေးကို အသုံးပြုနေရတာပါ ။ဒါ့ကြောင့် သူ့အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဒီလမ်းကြောင်းလေးကို ရှောင်လွှဲချင်နေတာ သဘာဝ ကျပါတယ်။ အခု မြန်မာကဖြတ်မယ့် ပိုက်လိုင်းသစ် ကတော့ တရုတ်တို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက သင်္ဘောနဲ့ သယ်လာတဲ့ ရေနံတွေကို ရခိုင်ကမ်း လွန်ကနေ မြန်မာကိုဖြတ်ပြီး ပို့မှာဖြစ်လို့ မာလက္ကာရေလက်ကြားကို မှီခိုရမှုမှာ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကပို့ မယ့် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဟာ တစ်နှစ်ကို ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံ ပို့နိုင်ပြီး ဒါဟာ တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ တင်သွင်းနေသမျှ ဓါတ်ငွေ့စုစုပေါင်းရဲ့ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတာပါ။
မြန်မာမှာ တရုတ်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကလည်း ဆက်ရှိနေ ပါဦးမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား သန်းချီပြီး ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ ပြီး နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော် မန္တလေးဟာ ဆိုရင်လည်း တရုတ်မြို့လို့ လူတွေခံစားနေ ကြရတယ်။ ဝ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ နေထိုင်ကြတဲ့ နယ်ဟာ တရုတ်နဲ့ ကပ်လျက်ရှိနေပြီး မြန်မာဘက်က သွားရင် တော့ စစ်တပ်ကင်းစခန်းတွေကနေသာ ဖြတ်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲ နှစ်ပါင်းများစွာကြာအောင် ဝင်လာခဲ့တာမို့အခုဆို သတ္တုတွင်း တွေနဲ့ ဆည်မြောင်းတွေ တည်ဆောက် ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ ချီပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ထားနေပြီးပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာမှာ တရုတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ သိပ်ကြီး နေတာကို ၂၀၁၀ တုန်းက အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်က တချိန်က ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဟာ “တရုတ်ရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ အန္တရာယ် ရှိလာနေပြီ” လို့ ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာမှာ တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကို ကြောက်တဲ့ အကြောက်တရားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ၀ါရှင်တန်ရှိ အမေရိကန်အစိုးရတို့ကို အပေးအယူလုပ် ညှိနှိုင်းမှုတွေ ရအောင် ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ မြန်မာရဲ့ ၂၀၁၁ မှာ အစိုးရသစ်တက်လာပြီး အပြောင်းအလဲအတွက် လမ်း ဖွင့်ပေးလာတာတွေဟာ အာရှကို ဦးတည်ချဉ်းကပ်လာနေတဲ့ အမေရီကန်ရဲ့ အလှည့်အပြောင်းနဲ့ လာတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒီအချက်က ရုတ်တရက် အောင်မြင်မှု ရသွားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွေထက် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ စဉ်းစားမှုတွေက ပိုပြီးအဆုံးအဖြတ်ကျနေတာကို ပြ သနေတာလည်း ဖြစ် ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ ပထမဆုံးသော အချက်ပြမှုကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေး လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တန်ဖိုးငွေ ဒေါ်လာ ၃ ဒဿမ ၆ ဘီလီယံရှိတဲ့ တရုတ်တို့ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ မြစ်ဆုံဆည် ကြီးကို ရပ်ဆိုင်းခိုင်းလိုက် ခြင်းပါပဲ။
အဲဒီကစလို့မြန်မာကို ယှဉ်ပြိုင်လွန်ဆွဲလုရတဲ့ ပွဲကြီးဟာ စတင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပတို့ဟာ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ မြန်မာ မှာ ထောက်ပံ့ရေးအေဂျင်စီ တွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံတွေကတဆဆင့်သာ ဝင်ရောက် နေပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း ဆန်ရှင်တွေလုပ် ပြီး မြန်မာကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်တွေ အတွင်းကတောင် တစ်ခါမှထွက် မသွားဖူးတဲ့ ဂျပန်ဟာ ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ခြောက်ဘီလီယံခန့်ကို လျှော်ပစ်ကာ မြန်မာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ်မှုတွေ လျင်လျင် မြန်မြန် ပြန်လုပ်လာနေပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ပြည်တွင်းမှာ ဂျပန်အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ပြသနေတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီတစ်ပတ် အတွင်းမှာပဲ ပါရီကလပ်ကနေ မြန်မာကို ကြွေးမြီတွေ လျှော်ပစ်ဖို့နဲ့ နောက်ထပ် ငွေစီးကြောင်းအသစ်တွေဝင်လာဖို့ လမ်း ဖေါက်ပေးတာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ ဘယ် အနောက်နိုင်ငံကမှရော၊ ဂျပန် ကပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကြီးကြီး မားမားတွေကို အသစ်စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ မရှိသေးပေမယ့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီးပွားရေးဇုန်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ရရှိနေပါတယ်။
သံတမန်ရေး အဝန်းအဝိုင်းမှာလည်း အမေရိကန်ဟာ မြန်မာကို ၎င်းရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ကော်ဘရာဂိုးလ်မှာ လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ် ထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ် တွေထဲမှာ တရုတ်ကတော့ နောက်ကျကျန်နေပါတယ်။ နေပြည်တော်ဟာ ပြည်တွင်းမှာ အကြီးမားဆုံး ကြေးနီမိုင်း ဖြစ်တဲ့ လက်ပတောင်းတောင် စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှု နောက်ကွယ်က မြေယာသိမ်းယူမှုတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတွေကို ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းနေပြီး မကြာမီက တရုတ်နယ်စပ်မှာ ကချင်တပ်တွေကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရင်း တရုတ်နယ်စပ်ထဲ အမြောက်ဆံတွေ ကျရောက်စေကာ စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်မှု အခင်းအကျင်းများကို သုံးသပ်ရရင် နေပြည်တော်ဟာ တရုတ်ကို စွန့်လွှတ်ပစ် လိုက်မှာတော့ မဟုတ်သေးပါ ဘူး။ အခြေအနေက အရှေ့ ကို လွှင့်ပစ်ပြီး အနောက်ကိုဖက်တွယ်လိုက်ဖို့ကလည်း အများကြီး ဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကတောင်မှ အခုအနေအထားကို မဟာဗျူဟာကျကျ ကောင်းကောင်းကြီး သိထားနေပါတယ်။ သူမက “တရုတ်ဟာ မြန် မာနဲ့ ကပ်လျက်မှာရှိနေပြီး အမေရိ ကန်ကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မေ့ပစ် လို့ မရပါဘူး”လို့ ပြောထားတာပါ ။တကယ်လို့ သူမသာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ သူမဟာ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ် ကြားက မြန်မာရဲ့အနေအထားကို ပထဝီနိုင်ငံရေးကစားပွဲ တစ်ခုအဖြစ်ရော၊ ဒီမိုကရေစီရေး ကစားပွဲတစ်ခုအဖြစ်ပါ ဘယ်လို ကစားသွားမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ကိုသွင်
Ref: David Pilling, Pipeline marks scramble for Myanmar. Fanicial Times,30 th Janaury.
မူရင်းဆောင်းပါးရှင် ဒေးဗစ်ပေးလင်းသည် Financial Times သတင်းစာ၏ အာရှအယ်ဒီတာဖြစ်ကာ ၎င်း၏ ပင်တိုင်ကဏ္ဍတွင် စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားနေသူ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
တရားရုံးချုပ်ကို ဟိုတယ်အဖြစ် တည်ဆောက်မည့် ကိစ္စအားအရေးကြီးအဆိုအဖြစ် လွှတ်တော်တွင် အဆို တင်သွင်းမည်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂။
ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးချုပ်နှင့် စုပေါင်းတရားရုံးအဆောက်အဦးတို့ကိုဟိုတယ် အဖြစ်တည်ဆောက်ရန် ဌားရမ်းထားခြင်းနှင့်ပတ်သတ် ပြီးလွှတ်တော်သို့ အရေးကြီးအဆိုအဖြစ် တင်သွင်း လွှာရေးသားရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ဥပေ ဒရေးရာ ကော်မတီဥက္ကက ပြောကြားသည်။
ယခင်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးချုပ် နှင့် စုပေါင်းတရားရုံးကိုဟိုတယ်အဖြစ် တည်ဆောက်ရန် ပုဂ္ဂလိကသို့ အဌားချ ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ယက်မှပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာကော်မတီအား တင်ပြရာလာမည့်အပတ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အမှီအချက်အလက် အပြည့် အစုံရေးသားပေးပို့ရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့ UMFCCI တွင် ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံ
“ကမ်းနားလမ်းကစုပေါင်းတရားရုံးက ၁၄.၄သန်းနဲ့ ဈေးတည့်တယ်။ ၁၄.၄သန်းက ဘယ်နှနှစ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ သို့သော်နှစ် ၃၀လောက် ဌားရင်တောင် တစ်လကိုသိန်း၃၀၀၊ သိန်း ၄၀၀ ထက်မပိုတဲ့ နှုန်းထားဖြစ်ပါတယ်။အတော့်ကို နည်းပါတယ်”ဟု မြန်မာ နိုင်ငံရှေ့ နေများ
ကွန်ယက်မှ ရှေ့ နေဦးကိုနီက ပြောကြားသည်။
ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးချုပ်နှင့် စုပေါင်းတရားရုံးကို ဟိုတယ်အဖြစ်တည်ဆောက်ရန် အတွင်းပိုင်းတွင် ပြန်လည်တည်ဆောက် ရန် ဖြိုဖျက်မှုများကိုပြုလုပ်နေပြိဖြစ်သဖြင့်လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းမည့် အဆိုကို သာမာန်အဆိုအဖြစ် တင်သွင်းခြင်းထက် အရေးကြီး အဆိုအဖြစ် တင်သွင်းပေးရန်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ နေများကွန်ယက်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရား စီရင်ရေး ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီကို တောင်း ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
New MyanmarFoundation's photo.
မြန်မာယန်စီ ကြေးနီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင် မိုင်းခွဲမှုကြောင့် ပြည်သူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်အချိန်တွင် မြန်မာယန်စီ ကြေးနီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော မိုင်းခွဲမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ မိုင်းခွဲမှုကြောင့် ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ မြရိပ်အုပ်စု ရေကြည်ပင်ရွာရှိ ဒေါ်လှဌေး၏နေအိမ်မှ ရေကန် ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ရေကန်ပြိုကျမှုကြောင့် ရေချိုးနေသော ဒေါ်လှဌေးသည် ရေကန်မှ အုတ်အကျိုးအပဲ့များ ပိကျကာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ မုံရွာမြို့ ဒေ၀ဂတိ လူမှုကူညီရေးကားဖြင့် မုံရွာဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်လာပြီး မုံရွာဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယမားချောင်းမြောက်ဘက် (ရေကြည်ပင်ရွာ)နေ ဒေါ်လှဌေး - ၅၀ နှစ်သည် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းအချိန် ရွာအလယ်ပိုင်း ရေကန်တွင် ပန်းကန်ဆေးနေစဉ်၊ တစ်မိုင်ကျော် အကွာ ကြေးစင်တောင် (ယမားချောင်းတောင်ဘက်) မှ ခွဲသောမိုင်းကြောင့် ရေကန်အနီးတွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ မိုင်း သုံးကြိမ်ခွဲရာတွင် ဒုတိယမြောက် မိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခု မုံရွာတွင် ဆေးကုသနေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Hla Moe
ဆန်းစစ်လိုစိတ်သာ ရှိပါတယ် ။
Khin Mg Ye Sein's photo.
တူမလေးတို့ ရေ...ဒါဖတ်ပြီးမှ မွတ်စလင်ယူဖို့ စဉ်းစားပါ ။
According to the website of the embassy of Saudi Arabia's  Islamic Affairs Department (IAD),  wife-beating is permitted in accordance with Qur'anic verses and Hadiths used by the IAD to explain the rightsahusband has over his wives ။
လင်ယောင်္ကျားကို အာခံတယ့် ဇနီးမယားကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်ခွင့်ပြုကြောင်း
It is also stated, "When the husband calls his wife to his bed and she disobeys, and he spends the night in anger against her, the angels keep cursing her till the morning."
အိပ်ယာဝင်ဖို့ လင်ယောကျာင်္းက ခေါ်တယ့်အခါမှာ ငြင်းဆန်တယ့် ဇနီးမယားကို ကျိန်စာသင့်
စေရမယ်လို့ လဲ ဆိုထားပါသေးတယ်။
In addition, "Ifawoman dies while her husband was pleased with her," it is explained that "she will enter into Paradise." 
လင်ယောကျာင်္းနှင့် ပျော်ပါး ဆက်ဆံနေချိန်မှာ ဇနီးမယား ဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့လျင် သူမ
ဟာ သုခဘုံ (ကောင်းကင်ဘုံ) ကို ရောက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ လဲ ဆိုထားပါတယ်။
(မှတ်ချက် ။ ဒီအချက်ကတော့ တူမလေးတို့ အတွက် အတော်ကို ရင်တုန်စရာ ကောင်းမယ့်
အစ္စလာမ်ဥပဒေ Shar'ia law နှင့်အညီ ဇနီးမယားကို ရိုက်နှက်ခွင့်ရှိကြောင်း စာအုပ်
ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သော စပိန်နိုင်ငံမှ မွတ်စလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Sheikh Muhammad Kamal Mustafa ကို ဘာစီလိုးနား တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၁၅ လ နှင့်
ဒဏ်ငွေ € 2160 ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ။
စီရင်ချက်ထဲမှာ တရားသူကြီးက Sheikh Mustafa ၏ စာအုပ်ဟာ
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို လှုံဆော်ထားကြောင်း၊ ယနေ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း
ဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ခန့် က အခြေအနေနှင့် လွန်စွာ ခြားနားကြောင်း၊
အခြေခံဥပဒေမှာ ပါရှိသော အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
ဖော်ပြထားပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် Sheikh Mustafa ၏ ရှေ့ နေ ကတော့ ဇနီးမယားကို
ရိုက်ပိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ သူ့ အမူသည်၏ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆ မဟုတ်ကြောင်း၊
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ ပါရှိသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း
စောဒက တက်ခဲ့ပါတယ် ။ (မှတ်ချက် ။ တမန်တော်ကြီးသာ ယနေ့ ခေတ်မှာ မွေးဖွား
ခဲ့လျင် တရားစွဲခံရမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ)
အစ္စလာမ်နှင့် ဇနီးမယား ရိုက်နှက်မှုအကြောင်း အပြည့်အစုံကို မှုရင်းလင့်ခ်မှာ
ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်လိုစိတ်မရှိပါ၊ ဆန်းစစ်လိုစိတ်သာ ရှိပါတယ် ။
Khin Mg Ye Sein 08/01/2013
ဧရာဝတီ နိုင်ငံတကာ စာပေပွဲတော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောကြား
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ၃ရက်နေ့ အထိ ၃ရက်ကြာ ကျင်းပလျက် ရှိသော နိုင်ငံတကာ နှင့် မြန်မာ စာရေးဆရာ ၁၀၀ကျော် ပါဝင်သည့် ဧရာဝတီ နိုင်ငံတကာ စာပေပွဲတော် ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လူငယ်တွေ စာဖတ်မှ တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
ဧရာဝတီ စာပေပွဲတော် ဒုတိယမြောက်ရက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူငယ်များအနေဖြင့် စာဖက်အားများမှသာလျှင် စဉ်စားဆင်ခြင်မှု မြင့်လာနိုင် ပြီး တိုင်းပြည်အနဂါတ် အတွက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်သည်။
စာပေ သင်ယူမှု၊စာပေ ဖတ်ရှုလေ့လာမှုတို့တွင် အလွတ်ကျတ်မှတ်သည့် စနစ်ကို ဆိုညွှန်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ အကြောင်းအရာများကို စဉ်းစားတွေးခေါ် နိုင်စေရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်မ ဘဝမှာ စိန်ခေါ်မှု အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေက အတွေးအခေါ်တွေဟာ အများကြီး အကူအညီပေးခဲ့တယ်" ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမ၏ ဖြတ်သန်းလာမှုအား ပြောကြားသည်။
လူငယ်များ အနေဖြင့် စာပေ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဘဝ၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ စာပေ တင်မကဘဲ၊ မိမိတို့နှင့် အတွေး အခေါ်အယူအဆ မတူသော နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ စာပေများလည်း ဖတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
"ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ တွေးပုံတွေးနည်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တန်ဖိုးထားတက်မှ အဲဒီဟာတွေကို ကြိုးစားတက်မှ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ တိုးတက်မှာပါ" ဟု ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
Feb 2, 2013 6:05am
အင်းယားလိပ် Sunset Terrace မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသောစကား။ ရိုက်ကူး-ကိုခန့်
မခံမရပ်နိုင်အောင် နာလွန်းအားကြီးလို့ ဆံပင်ဖြတ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ဆင်းလာခဲ့သူ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းများထဲတွင် အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည့် မျက်စိ အား ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှစ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေး ခန်းရှိ မျက်စိဆေးရုံ၌ ခေတ်မှီခွဲစိတ်ကိရိယာများဖြင့် မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား စက္ခုအလင်း ရရှိအောင် စေတနာရှင် ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် (အခမဲ့) မျက်စိခွဲစိပ်ကုသမှု စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ် ပါသည်။
၂၅.၁.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ (၅းဝဝ)နာရီ ကျွန်မတို့လူမှုရေး ဝန်ထမ်းများအားလုံးတို့၏ အိမ်ပြန် သည့်အချိန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်၏ လုံခြုံရေးဂိတ် အရှေ့ထိုင်ခုံတွင် မျက်လုံး တစ်ဖက်သည် မျက်စိအိမ်အတွင်းမှ လွန်စွာပြူးထွက်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အမှတ်မထင် တွေ့ခဲ့ မိသည်။ နောက်တစ်နေ့ နံနက်ရုံးတက်ချိန်တွင် ၄င်းအမျိုးသမီးအား ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရာ ၄င်းအမျိုးသမီး အား မည်ကဲ့သို့ ယခုလိုမျက်စိဝေဒနာ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့ရာသူမ၏ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အား စိတ်မ ကောင်းဖြစ်စွာ ပြောပြခဲ့သည်။
၄င်းအမျိုးသမီးသည် ဖျာပုံ၊ ၁၇ ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်တာလမ်း၊ နယ်မြေ (၇) တွင် နေထိုင်သူဖြစ်သည်။ “ကျွန်မ ဒေါ်အေးပြုံးပါ အသက် (၆၉) နှစ်ရှိပါပြီ ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်တာ (၂၆) နှစ်ရှိပြီ သားနှစ်ယောက်နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေရင်းနဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျတော့သား (၂) ယောက် စလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒီမျက်လုံးဖြစ်တာက ထမင်းချက်ဖို့ ထင်းခွဲရင်း သစ်ကိုင်းစက မျက်စိကို စိုက်သွားတာ။ အရှိန်ပြင်းတယ်။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတော့ နာတော့လည်း ပိုက်ဆံမရှိလို့ မကုခဲ့ဘဲ နေခဲ့တယ် ဖြစ်တာက(၂) နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အခု မခံမရပ်နိုင်အောင် နာလွန်းအားကြီးလို့ ဆံပင်ဖြတ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ဆင်းလာခဲ့တာပါ။ ဆံပင်ရောင်းတာ ၇ဝဝဝိ/- (ခုနှစ်ထောင်) ရတယ်။ ရွာမှာရှိတဲ့ လူတွေက ဦးကျော်သူဆီသွားဖို့ ပြောလို့ရောက်လာခဲ့တာ။ အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ ကျော်သူရှိတဲ့နေရာ ကို မသိဘူး။ ကျွန်မတို့ရွာက (Breasts Cancer) ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နေတဲ့ သမီးတစ်ယောက်နဲ့ လူကြုံ လိုက်လာတာ။ သူကလည်း ကျော်သူ့ဆေးခန်းမှာ ကုဖို့ဆိုတော့ အတူတူလိုက်လာတာ။ တည်းဖို့က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အရင်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေရာမရှိတော့လို့ .. ကိုယ်သိတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းကလည်း မရှိတော့။ အခု ဒလဘက်ခြမ်း ကမ်းနားမှာရှိတဲ့ တည်းခိုခန်း တစ်ခုမှာတည်းတယ်။ မခံစားနိုင်လွန်းလို့ ရောက်လာခဲ့တာပါ” ဟု မျက်ရည်ဝဲကာ ပြောပြခဲ့သည်။
မျက်စိသည် အလွန်အံ့သြ ဖွယ်ကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် လွန်စွာမှ ဂရုစိုက်ရသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မျက်စိသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အသုံးဝင်၍ အလွန်သိမ်မွေ့နူးညံ့သော အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏။ အနည်းငယ် သော ဒဏ်ရာနှင့်ပင်လျှင် မျက်စိကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီး မျက်စိကို ကွယ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မျက်စိများကို ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ မျက်စိဆရာဝန် ဒေါက်တာချိုချိုလှိုင်မှ မျက်စိဝေဒနာရှင် ဒေါ်အေးပြုံးအား ခွဲစိတ်ကုသရန်အတွက် သင်္ကန်းကျွန်းဆေးရုံ မျက်စိခွဲစိတ်ခန်းတွင် အကြီးစား ခွဲစိတ်ရန်အတွက် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ ခွဲစိတ်ခန်း ကုန်ကျငွေအား ဆေးကူညီမှုစနစ်ဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသပေးတော့မည် ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အေးပြုံးသည် ဆံပင်ဖြတ်၍ ရောင်းချခဲ့ သည့်ငွေဖြင့် ခွဲစိတ်စရိတ်၊ ဆေးခန်းစရိတ် မကုန်ကျသော်လည်း တည်းခိုစရိတ်၊ ခရီးစရိတ်၊ စားစရိတ် အဘယ်ကဲ့သို့ စခန်းသွားမည်နည်း။
ထိုကဲ့သို့ တွေးနေခိုက် လူနာတိုကင်ဆောင်မှ ဖုန်းဆက်၍ ကင်မရာနှင့် မှတ်တမ်းယူလာရန် ခေါ်ဆို၍ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် လူနာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဒဏ်ရာသည် ဒေါ်အေးပြုံး နှင့်ဆင်တူ ဖြစ်ရပ်မတူသော ဒေါ်အေးသန်း အသက် (၅၇) နှစ်သည် သူ၏ မြေးလေးနှင့်အတူ ကစားခဲ့စဉ် မြေးလေး၏လက်နှင့် မျက်လုံးအား မတော်တဆ ရိုက်မိခဲ့သည်။ ရိုက်မိခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ရာသီဥတု အအေးဒဏ်ကြောင့် ရံဖန်ရံခါ နာတစ်လှည့် အောင့်တစ်ချက်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ (၅) နှစ် တာကာလသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို့ မျက်လုံးအသားထွက်လာသည်မှာ (၇) လ ရှိပြီဖြစ်သည်။ မျက်စိမမြင်ရသည်မှာ (၃) လခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အေးသန်းသည် မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ကော့ကရင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၄င်း မျက်စိဒဏ်ရာဖြင့် သားဖြစ်သူ နေထိုင်ရာ ကော့သောင်းမြို့သို့ အလည်သွားရောက်ခဲ့ရင်း ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း DVD အခွေကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အေးသန်း၏ သားမှ “အမေ ဦးကျော်သူ ဆီကို မရောက်ရောက်အောင်သွားကု .. အမေပျောက်သွားတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို သား ကော့သောင်းမြို့မှာ ထောက်ခံစာ လုပ်ပေးမယ်” ဆိုပြီး အဆင်ပြေခဲ့သည်။ ဒေါ်အေးသန်း၏ မှတ်ပုံတင်သည် သူမ၏ နေရပ်ရွာ သည် “မာရမ်း” တွင်နေထိုင်စဉ် ရာသီဥတုကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် မှတ်ပုံတင်ပျောက်သွားခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူ လုပ်ပေးလိုက်သည့် မှတ်ပုံတင်ကိုယူပြီး ချွေးမနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တည်းခိုခန်းတွင် တည်းခို နေထိုင်ကာ ဦးကျော်သူ၏ ဆေးခန်းဆီသို့ အရောက်လာခဲ့ကြောင်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြောပြခဲ့သည်။
ယခု တင်ပြလိုက်သော မျက်စိဝေဒနာရှင် (၂) ဦးလုံးသည် မျက်စိဝေဒနာအား နှစ်နဲ့ချီ ခံစားခဲ့ကြ သည်။ အကယ်၍ သုခကုသိုလ်ဖြစ် မျက်စိဆေးရုံသာ မဖွင့်ဖြစ်ခဲ့လျှင် မည်သို့ပင် မခံမရပ်နိုင်အောင် နာ ကျင်မှုဒဏ်အား ကြိတ်မှိတ်ခံစားပြီး မျက်စိကွယ်သည်အထိ နေကြတော့မည်လား။ စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြသော လူနာများမို့လို့သာ ဦးကျော်သူ မျက်စိဆေးရုံသို့ မရောက်ရောက်အောင် လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး လည်း မပြည့်စုံ၊ ဝေဒနာများကိုလည်း ခံစားနေရကာ စိတ်လျော့လိုက်သော မျက်စိဝေဒနာသည် မည်မျှပင် များပြားနေဦးမည်နည်း။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ မျက်စိဝေဒနာရှင် ဒေါ်အေးပြုံးနှင့် ဒေါ်အေးသန်းတို့ နှစ်ဦး လုံးအား သုခကုသိုလ်ဖြစ် မျက်စိဆေးရုံမှ ဝေဒနာပျောက်ကင်းစေရန် စေတနာရှင်ဆရာဝန်ကြီးများ အကူ အညီဖြင့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးအား လက်ကိုင်ပြုကာ ဆေးဝါးကုသပေး နေလျှက်ရှိပေတော့သည်။
တရုပ် ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်းအလဲ အချို. သိကောင်းစရာ
---Anti-corruption or Party Rectification in China.
by Aye Aye Soe Win on Friday, February 1, 2013 at 6:12pm ·
တရုပ် က အပြောင်းအလဲ အချို. သိကောင်းစရာ---
-သမ္မတ သစ် ရှီဂျီပင်း Mr. Xi Jingping
သမ္မတက ရှီဂျင်ပင်းကတော. ၂၀၁၃ နွေဦးကစလို. တနိုငငံလုံးက ခြစား လာဘ်ယူ ၀န်ထမ်းကြီးတွေကို အရေး ယူမယ်လို.စ ပြောနေတဲ.သူ။
-ပါတီဝင်များကျင်.၀တ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုးချုပ် ၀မ်ကီ ရှိန် Mr. Wang Qishan
anti-corruption အလုပ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးမဲ.သူ။ ခြစားတိုက်ဖျက် ရေးကော်မရှင် တပ်မှုးကြီး စီစီဒီအိုင် ဥက္ကဌ ၀န်ကီ ရှိန် လည်း တာစူ ရုံမက လူစစ် လူဖမ်း လုပ်ငန်း စနေသူ။
-နောက်ပေါက် ပေါလစ်ဗျူရို တစ်ဦး မစ္စတာ ယူဂျန်ရှန်း Mr. Yu Zhengsheng
ရှန်ဟိုင်း စီစီပီ ဥက္ကဌ၊ ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ.၀င် ဖြစ်ပြီး ပါတီဝင်ကြီးတွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်းများကို စစ်သင်.တယ်လို.ပြောတဲ.သူ။ ကျုပ်အစစ်ခံရဲပါတယ် လို. ရှေ.ထွက် ပြော လမ်းတွေ ဖွင်.ပေးနေသူ။
၂၀၁၂ ခုနှစ် တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် ပါတီ ညီလာခံအပြီး ရေစီးကြောင်း
လက်ရှိ တရုပ်သမ္မတ ယျူဂျင်တောင် Hu Jintao (၂၀၁၃ မတ်လတွင် သမ္မတရာထူးမှနားမည်.သူ) က အထွေထွေသော-အကျင်.ပျက်ခြစားမှုတွေကို တိုက်ဖျက်ပြီး ပါတီ ကို သန်. ရှင်းစေရမယ်လို. ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ က ၁၈ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် အဖွင်.မိန်.ခွန်း မှာ ဆို ခဲ.ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင်. သူ.တရားဝင် နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက် မိန်.ခွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီစီပီ ၏ ၁၈ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်စ် မှာ ထူးခြားချက်အချို.ရှိနေပြီး အမြင်.ဆုံး မူဝါဒရေးရာ standing politburo ၏ လူ ၇ယောက် ထဲမှာလည်း ထူးခြားချက်အချို. ရှိပါတယ်။ ဒီထူးခြားချက်တွေကို မြန်မာအစိုးရက သူတို.လိုဘ အတိုင်းဆက်သုံးလို. မရတော.တာကို လူအချို. သိခဲ.ကြမှာပါ။ အချို.အချက်အလက်လေးတွေက အမှတ်ရကောင်းပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးဟာ ပေါ်လစ်ဗြူရို အဖွဲ. ၀င် ၃ ဦး အကြောင်း ထက် စီစီဒီအိုင် -- The Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China အကြောင်း ၊စီစီဒီအိုင် ၏ နောင် ၁၀ နှစ် စီမံကိန်း ၊ ခု လူတွေ စောင်.ကြည်.နေတဲ. ထိပ်ကစ အောက်ခြေ အထိ ပါတီသန်.စင်ရေး ကင်ပိမ်း Chinese Communist Party Rectification Campaign ကို ခန်.မှန်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကျင်.ပျက်မှုကို ၂၀၁၃ နွေဦးက စလို. အမြန်ဆုံး ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ တိုက်ဖျက်မယ်လို. ၁၈ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်စ်မှာ ကြေငြာခဲ.သူ သမ္မတသစ် Xi Jingping(၂၀၁၃ မတ် ၁၅ တွင် သမ္မတရာထူး လက်ခံရမည်)
-သမ္မတ သစ် ရှီဂျီပင်း
ပါတီခေါင်းဆောင်အသစ်လည်းဖြစ်၊ သမ္မတသစ်လည်းဖြစ်တဲ. Xi Jingping ရှိဂျင်ပင်း ဟာ ပါတီ သန်.စင်ရေးကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီး တက်လာခဲ.ပါတယ်။ အကျင်.ပျက်မှုတွေကို ခေါင်ပိုင်းက စဖြိုမယ် ဆိုတဲ.သူ. အာဂျန်ဒါ ဟာ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိပဲ လုပ်မရပါ။ အထူး သဖြင်. တရုပ်ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ.၀င်တွေ ၏ထောက်ခံမှုမပါပဲ၊ စလို.မရတဲ. ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။
လုပ်ပြီဆိုကတည်းက လုပ်လို.၇တဲ. အခြေခံတွေ ၊တွန်းအားတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင်.တွေ နဲ.အတူ သမ္မတသစ်ရဲ. သီးသန်..နိုင်ငံရေး အလို political will ပါ ရှေးဦးမစွ ခင်ကတည်းက ရှိနေလို.ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူ.မှာ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပြီး သူမက ခု အမေရိက က ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။ နံမည် အရင်းနဲ. တော.မဟုတ်ပါ။ ကလေးမလေး က အနေအေးပြီး အဖေက အနောက်က ယဉ်ကျေးမှု ကို သဘောကျလို. နှစ်သက်လို. သမီး ကို အမေရိကမှာ ကျောင်းထားတယ်လို.၊ ဆိုပါတယ်။ သမ္မတသစ် ၏ ဆွေမျိုးတွေကတော. စီးပွားရေး အထူးအောင်မြင် လျှက် ရှိပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်သူတွေက သူ.ယောက္ဖ သူ. အမ နဲ. တူမ တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Anti-corruption Czar မင်းကြီး မစ္စတာ ၀န် ကီ ရှိန်။ စီစီဒီအိုင် The Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China ၏ ခေါင်းဆောင်သစ်။ တောင်ပိုင်းက သတင်းစာမျာက သူ. ကို တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဒုတိယအကြိမ်ဆေးကျောသန်.စင်ရေးအတွက် အရေးပါသည်။ တိကျစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု အမှတ်ပေးထားကြသည်။
-ပါတီဝင်များကျင်.၀တ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုးချုပ် ၀မ်ကီ ရှိန်
သမ္မတသစ်၏ လက်ရုံး၊ ဒု ၀န်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်၊ အကျင်.ပျက် ၀န်ထမ်းနှိမ်နင်းရေး စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ်ပေးမဲ.သူက Mr. Wang Qishan ဖြစ်တယ်။ မစ္စတာ ၀မ်ကီရှိန်ကို ခြစားသူတွေ အသေဆော်မဲ.ဇာဘုရင်ကြီး anti-corruption czar လို.ခေါ်ကြတယ်။ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာက စလို. The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) ၏ မဟာမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ.ပါတယ်။ စီစီ ဒီအိုင် ဟာ တရုတ်ပါတီလက်အောက်က ပါတီ ၀န်ထမ်း အကျင်.ပျက်စည်းကမ်းမဲ.တာတွေကို အရေးယူနိုင်တဲ. စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်၏ အက်ဖ်ဘီအိုင် လို.သတ်မှတ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။
စီစီ ဒီအိုင်ကော်မရှင် ဥက္ကဌသစ် ၊ ခြအိမ်များကို ဖြိုမဲ.သူ နစ်က်နိမ်းရထားတဲ. မစ္စတာ ၀မ်ကီရှိန် က လက်သံပြောင်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတယ်၊ ပြဿနာတွေကို ကြမ်းကြမ်း ရှင်းနိုင်တယ်။ ဘယ်သူ.မှချမ်းသာမပေး လို. နံမည်ထွက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ လလယ် စီစီဒီအိုင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမင်းကြီး ရာထူး ရ ပြီး ၂ ပါတ်အတွင်းမှာ ခပ်ကြီးကြီး ၀န်ထမ်းတွေ အများကြီး အဖမ်းခံ ရ၊ အလုပ်ဖြုတ်ခံရပါတယ်။ သူဟာ ဒုဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးပါယူထားပြီး လက်တွေ.ကျတဲ. သူ. အာဂျန်ဒါ နဲ. လုပ်ပိုင်ခွင်. ကိုလည်း ကြည်.ရပါမယ်။ အချို.ကတော. သူ ဟာ ထိပ်သီး တစ်ဒါဇင်နှင်. သူတို. မိသားစုတွေ ရဲ. အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို. သံသယ ရှိကြပါတယ်။
သူ က လက် ရှိတရုပ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ. ပါတီဝင်များလောက ကို အောက်ပါအတိုင်း သရုပ်ဖေါ်ခဲ.ပါတယ်။
အကျင်.ပျက် အရာရှိတွေဟာ ညစ်ညမ်းနေတဲ. မစင်ထဲမှာ အရေအတွက်များစွာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ထပ်တိုး ထပ်ပေါက်ဖွားနေကြတယ်။ တရုပ်သမိုင်းမှာ မကြုံးဘူးလာက်အောင် အဆိုးဆုံး ခြစားမှုတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ ကျုပ်တို. မညင်းနိုင်ဘူး။ ပြည်ပျက်နိုင်တဲ. အချက်အလက်တွေ သက်သေခံတွေ အများ ကြီး ရထားတယ်။ ပြဿနာက ကြီးလွန်းတော.- ခြစားမှုကြောင်.ပဲ ပါတီ လည်းပြိုနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတော်လည်း ပြိုနိုင်တယ်။ အား လုံး-- ဒီတော. ပါတီဝင်အားလုံး သတိရှိဖို. လိုတယ်--
လို. ပါတီ ကွန်ဂရက်စ် မှာ ပြော ခဲ.တယ်။
ဒါကိုကြည်.ရင်- ခေါင်းဆောင်သစ်တွေနဲ. အာဂျန်ဒါအသစ်တွေကြားမှာ တရုပ်အစိုးရအနေနဲ. ချိန်ကိုက် ညီမျှစွာ လုပ်ဆောင်ရမှုတွေ ဖြစ်လာတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ပါတီ အပေါ်အယုံအကြည်ကင်းလာတဲ. တရုပ်လူထုနဲ.ပါတီင်္အကြား နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ယုံကြည် လေးစား အားထားမှု တည်ဆောက်ဖို. အရေးကြီးပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးစီးပွားရေးချိနဲ.နေတဲ.အချိန်မှာ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ အထိအခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်ဖို.၊ တနည်း သူများနိုင်ငံတွေ ခံရသလောက် မခံရဖို.၊ စီပွားရေးအရ ဆက် ရှင်သန်နိုင်ဖို.၊ ဆူလောင်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ. လူတွေကို ထိန်းနိုင်ဖို.၊ ကျေနပ်စေဖို.၊ ဒါတွေဟာ တရုပ်အစိုးရအတွက် ပိုလို.တောင် အရေးကြီးပါတယ်။
ထိပ်သီးတွေက စ ခြစားလို. နိုင်ငံအ၀ှမ်း ထရီလီယံ၊ ဘီလီယံနဲ.ချီတဲ. စီးပွားရေး ဖိတ်စင်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် တားလိုက်တာနဲ. လူမှုစီးပွားကွာခြားမှုတွေကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြေရှင်း ပြီးသား ဆိုတာ အ၀င်နဲ. အထွက်ကို တွက်ချက်တတ်တဲ.၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ ပိသုကာတွေနဲ. သိပ်သည်းနေတဲ. ပေါ်လစ်ဗျူရိုက တရုပ်ခေါင်းဆောင်များ သိကြပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ.- လူထု ယုံကြည်မှုကိုရလာနိုင်တယ်၊ ပါတီ ၏ ပုံ ရိပ်လည်း အရောင်ပိုထွက်လာ နိုင်တယ်ဆိုတာ ဆိုတာ တရုပ်စီစီပီ ခန်.မှန်းခဲ.ပုံရပါတယ်။ ဒါ.ကြောင်.သာ- လူကြိုက်များပြီး နိုင်ငံ၏အထင်ကရ လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်နေတဲ. အကျင်.ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကင်ပိမ်း နဲ. အာဂျန်သစ် စခဲ.တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က- အိုင်တီခေတ်မှာ ထိပ်ပိုင်းက လူကြီးတွေ၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်း ဖုံးဖိထားလို. မရအောင် လည်း ဆက်တိုက်ပေါ်နေတော.တာမို.၊ ရှောင်တဲ.နည်းကို မသုံးတော.ပဲ၊ ရင်ဆိုင်တဲ. နည်း ကို သုံးပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ရအောင် လုပ်ဆောင် မှု တစ်ခု လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၆ နောက်ပိုင်း ထိပ်သီး အကျင်.ပျက်ဝန်ထမ်းကြီးများနဲ. စီစီပီ ကော်မတီဝင်များအတွက် ပို အခက်အခဲတွေ.လာရပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဟာ ဗဟိုက လူကြီးတွေ လည်ပင်းစညှစ်ခံ ရ တဲ. နှစ်ဖြစ်ပြီး ရှေ.ရှောက် အလားအလာက လည်း လူကြီးတွေ ပို သတိထားရမဲ. အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ သမ္မတ သစ်၏ anti-corruption အာဂျန်ဒါ ကို ဘယ်သူတွေက ကူညီပေးနိုင်ပြီး ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ နိုင်ငံတော်အဆင်. မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချ နိုင်သလဲ ဆိုတာ တရုပ်စီစီ ပီ ၏ ပါတီဝင်ကျင်.၀တ်နှင်. စည်းကမ်းထိန်းသိန်းရေး ဗဟို က်ာမတီ ၏ လုပ်ဆောင်မှုနဲ. တိုက်ကြည်.နိုင်ပါတယ်။
တရုပ် စီစီ ဒီအိုင် ( ပါတီဝင်ကျင်.၀တ်နှင်. စည်းကမ်းထိန်းသိန်းရေး ဗဟို က်ာမတီ) ၏စွဲချက်တိုင်းမှာ အစစ်ဆေးခံရတဲ. လူ ၁၀၀မှာ ၉၈ ယောက် မလွတ်စေရဘူး လို. စီစီဒီအိုင်က ထောက်လှန်းရေးရဲများ စုံထောက်များက ခိုင်မာစွာ ပြောဆိုပါတယ်။ စီစီ ဒီအိုင် က ၅နှစ်အတွင်း ခြစားအကျင်.ပျက်မှု ကေ.စ်စုစုပေါင်း ၆သိန်း ပဲ စွဲခဲ.တာ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်၊ သူခိုး ၆ သန်းလောက် ရအောင် လုပ်သင်.တယ် တင်ပြတဲ. အဆိုတောင် ရှိခဲ.ပါတယ်။ တယောက်မှ မလွတ်အောင်လုပ်ရင် ၆ သန်း သို.မဟုတ် သန်း၆၀ တောင်ဖြစ်နိုင်တယ် လို. သမ္မတ သစ်က ပါပြောခဲ.ပါတယ်။ ( အတိုင်အဖေါက်ညီ နေကြတဲ. နှစ်ပါ)။
အနာဂတ်ခေါင်းဆောင် ပေါ်လစ်ဗျူရို တန်းစီး ၇ ယောက်မှာ ထင်ရှားသူတစ်ဦး။ စီစီပီ ၏ မဲဗရစ်ခ် maverick-like လို. ဆိုနိုင်သူ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကြားမှာ သာမည ထုံးစံတွေ ကို ရှောင်ပြီး လိုရင်းသာ တည်.တည်. ပစ် တတ်သူဟု ကျော်ကြားသည်။ သူ. အကို က အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ witness protection program ၁၉၈၅ က စ၍ ခိုလှုံနေသည်။ --ကျုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကို အစစ်ဆေးခံလိုပါတယ်ဟု- ၁၈ ကြိမ်မြောက် စီစီပီ ကွန်ဂရက်မှာရဲရဲပြော လမ်းဖွင်.ပေးခဲ.သူ။
ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ.၀င် အသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းကြောင်းက မဲဗရစ်ခ် ဆန်ဆန် မစ္စတာယူ ဂျန်ရှန်း
သမ္မတ သစ်၏ အာဂျန်ဒါသစ် လာဘ်စားအရာရှိများတိုက်ဖျက်ရေးလမ်းကြောင်း မှာ----- အကူအညီပေးမဲ.သူတွေထဲကနောက်တစ်ဦးက တော. လက်ရှိ ပေါလစ်ဗျူရိုမှာ မထင်ပဲရှေ.တန်းရောက်လာတဲ. ရှန်ဟိုင်းက ပါတီခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ယူဂျန်ရှန်း Yu Zhengsheng ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အဖွဲ.၀င် ၇ သီး ရှိတဲ. ထိပ်ဆုံးက Standing Polit Bureau ပေါ်လစ်ဗျူရိုမဖွဲ.၀င်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုပ် စီစီ ပီ် ကွန်ဂရက်စ်မှာ သူ.ရွှေ.ကွက်နဲ. အာဂျန်ဒါကို လူတွေက စသတိထားလာကြပါတယ်။ သူ. အကိုက ၁၉၈၃ မှာ အမေရိက ကို ထွက်ပြေးပြီး ခိုလှုံခွင်.ယူခဲ.သူဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မက္ကစီကို နိုင်ငံမှာ မျက်မြင်သက်သေ လုံခြုံရေး အစီအစဉ်အောက်မှာ အမေရိက စားရိတ်နဲ. နေထိုင်ရသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ အမေရိကန်အတွင်းစည်းထဲ တရုပ်ကထဲ.ထားတဲ. စပိုင် ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးကို အမေရိကန်အစိုးရ ခြေဖျက်နိုင်ခဲ.တာ၊ မစ္စတာ ယူ ၏ အကိုကြောင်.လို. သတ်မှတ်ခဲ.ကြပါတယ်။ ဒီလို ဘက်ဂရောင်း ရှိတဲ.သူတစ်ဦးက လူ ရ ဦးပဲ ရှိတဲ. ထိပ်ဆုံးက standing polit-bureau မှာ ပါလာခြင်းဟာ သိပ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။
မစ္စတာ ယူ ဂျန်ရှန်းကို တောင်ပိုင်းက လွတ်လပ်သောသတင်းစာတွေက ရှင်းလင်းဖြောင်.မတ် စွာတွေးနိုင်စွမ်း ရှိတဲ. ပါတီခေါင်းဆောင်၊ ပြီးတော. သမ္မတ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လွယ်စေချောမောစေမဲ.သူလို. လို. ခေါ်ကြပါတယ်။ သူဟာ တိဘက် ဘ၀နေထိုင်မှုနဲ. ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ထောက်ခံသော်လည်း ဒလိုင်းလားမားcult (မှားမှား မှန်မှန် ဂိုဏ်းဆန်တဲ. ဒလိုင်းလားမားအစွဲဝိ၀ါဒ) ကို ဆန်.ကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ယူဂျန်ရှန်းက ပါတီကွန်ဂရက်စ် ညီလာခံမှာ ထွက်ပြောတယ်။ ပါတီ ထိပ်သီး ပိုင်းတွေ ရဲ. ချမ်းသာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ နဲ. ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်း အစစ်ဆေးခံသင်.ပါတယ်တဲ.။ ပါတီ ထိပ်သီး ပိုင်း ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြ ရမယ် ဆိုရင်၊ သူ ကိုယ်တိုင်ရှေ.ထွက် အစစ်ဆေးခံချင်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု စာ ရွက်စာတမ်းတွေ သူကစ ပြ ပေး ပါ.မယ်လို. ရှေ.ထွက်ပြော ကြေငြာ ပေးခဲ.ပါတယ်။ ပါတီ၏ မဲဗ၇စ်ခ် ။
သူ. ဒီ စကားကြောင်.-- ကျန်တဲ. အလယ်စည်းမှာ ကျစ်နေသိပ်သည်းနေတဲ. တခြားခေါင်းဆောင် တွေ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပါ ပြ ဖို. ဖိအားပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ရှေ.ထွက်ရဲတယ်ဆိုတာ- အစစ်ခံရဲလို.သာ ရှေ.ထွက်တာဖြစ်တယ်။ နောက်၂လအတွင်း အာဏာကုန်သုံးနိုင်မဲ. သမ္မတသစ်နဲ. မူဝါဒရေးရာမှာ လက်ဝါး ရိုက်ထားတယ်လို. သတ်မှတ်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီစီဒီအိုင် ဥက္ကဌ ၀န်ကီ ရှိန် ကို တရုပ်တောင်ပိုင်း ဟောင်ကောင် ကျွန်းထုတ် အိကော နောမစ် စာဆောင် တွေနဲ. သတင်းစာ အချို.က ထုတ်ဖေါ်ချီးကျူးခဲ.ပါတယ်။ ပါတီ သန်.စင်ရေး နဲ. ပါတ်သက်ပြီး မော် စီ တုန်း လက်ထက် ၁၉၄၀ နှစ် လွန်များ က တခါ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကိုင်တွယ်ခဲ.ဖူးတယ်။ ၂၁ ရာစု အရောက် အိုင်တီခေတ် မော်ဒန်ခေတ်မှာ--တရုပ်ပြည်အတွက် ပါတီ သန်.စင် ဆေးကျော မှု ဆိုင်ရာ လုပ်သမျှ ထဲမှာတော.--မစ္စတာ ၀န်ကီ ရှိန် လက်ထက် ဒုတိယ အကြိမ်ပါတီ ခိုင်မာသန်.စင်ရေး party rectification ဖြစ်လေပြီလို. ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလို တိတိကျကျ လုပ်မဲ.သူ ကိုရွေးတာ အကြောင်း ရှိရမယ်။
တရုပ် ပြည်တွင်းအကျိုးစီးပွား domestic interest နဲ. ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ domestic political concerns ကို ထိန်းချုပ်ဖို. က အကြောင်းတရား----ဒီတော. ခု လက်ရှိခေါင်းဆောင် တန်းစီး အဖွဲ. ကို ကြည်.။ သိသာလှတယ်။ current leadership lineage မှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေပါတယ်။ တရုပ်ပြည်က လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်မှာ ဘာစံတွေနဲ. ရွေးခဲ.ကြသလဲ။ လူ ရွေးချယ်မှု ၊ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှု တွေက အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်။ - ဒီအဓိပ္ပါယ်မျိုးပဲ ထွက်တယ်။
အနောက်ကမ္ဘာက ဒီမိုကရေစီမျိုး ကို ခရေဇီဖြစ်တဲ. သူတွေကတော. ၂၀ကြိမ်မြောက် တရုပ်စီစီပီ ညီလာခံ မရောက်ခင်မှာ ကို တရုပ်နိုင်ငံမှာ ထူးခြားတဲ. အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်ဖြစ်လိမ်.မယ်လို. လိုရာစွဲတွေး မျှော်လင်.နေကြပါတယ်။ တရုတ်ကြီးတွေ ဆိုထုံး အရ ညီညွတ်မျှတ သဟဇာတ ရှိသော ဆိုရှယ်လစ် နိုင်ငံတော်ဆိုတာ ပြည်သူလူထု၏လိုအင်ကို ထည်.မစဉ်းစားပဲ ကြံ.ခိုင်သန်စွမ်းအောင် လုပ်မရ လို. အများကသိနေကြ သလို--ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်းက တရုပ် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လည်း သိနေကြပုံပါ။
သို.သော်--.ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မူ ရီးဖေါင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆိုတာ-- သူတို.ကတိပေးကြေငြာထားတဲ. အတိုင်း ဖြစ် မဖြစ်ကတော.၊ အချိန်ဇတ်ခုံပေါ်မှာပဲဆက်ကြည်.ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ. ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ မဖြစ်မနေဆောင်ရမည်ဖြစ်သော အလုပ်တွေ နက်ရှိုင်းလွန်းလေလေ၊ တော်လှန်ရေး အသွင်ဆောင်လေလေ ပါပဲ။ ဒီတော.-တရုပ် စီစီပီ က ဘယ်လောက်အထိ အဆင်သင်.ဖြစ်နေကြပြီဆိုတာ--ဘယ်သူမှ အတိအကျမသိနိုင်လောက်အောင် စောလွန်းနေပါသေးတယ်။
အသွင်ပြောင်းရေး ဆိုတာထက် ၊ ပြောင်းရမဲ. အချိန်မှာ ပြောင်းရင်ပြောင်း၊ မပြောင်းရင် ပါတီပျက်နိုင်ကိန်းရှိနေလို.၊ တရုပ်ကြီး၏ စီစီပီ က ထုံးစံအတိုင်း လက်တွေ.ကျတဲ. လမ်းစဉ်နဲ. သူတို.ပါတီကို ချောက်ထဲမကျခင်--စွန်.ပြီး ကယ်ဆယ်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
--Andrew Jacobs (June 14, 2012). "Accused Chinese Party Members Face Harsh Discipline". The New York Times. Retrieved June 15, 2012.
--Michelle Yu (December 14, 2012) China’s New Anti-Corruption Czar Gears up to ‘Rectify’ Communist Party. Epoch Times .
--"Hu Jintao opens China party congress as leadership change begins". BBC News. 8 November 2012. Retrieved 8 November 2012.
-- Benjamin Kang Lim China princeling emerges from defection scandal. Reuters.
--Brian Spegele (November 8, 2012) China Leader Nods to Concerns Over Corruption. The Wall Street Journal.
--Russell Leigh Moses ( Feb 1, 2013) The China Communist Party reform Punt. The Wall Street Journal.
--China’s Rise and the Two Koreas, Scott Snyder, Lynee Rienner, Publishers, London,
--Sheridan, Michael (June 4, 2012). "Beijing elite shaken by CIA spy scandal". The Times.
--China's next leaders: Who's who. CNN
--Analysis Intelligence Blog on China
လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွ...
ဆိုးလ် အမျိုးသားတက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆေ...
KIA, နှင့် မြန်မာအစိုးရ တို့ တရုတ်တွင်ဆွေးနွေးမည်ဟ...
ပြည် သူ တွေ အတွက် တော်လှန် ရေး အဓွန့်မရှည် ပါစေ ...
မြောက်ကိုရီးယားက နျူဗုံးစမ်းသပ်မည့် နေရာအကာအရံများ...
တရားရုံးချုပ်ကို ဟိုတယ်အဖြစ် တည်ဆောက်မည့် ကိစ္စအားအ...
မြန်မာယန်စီ ကြေးနီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းခွင် ...
ဧရာဝတီ နိုင်ငံတကာ စာပေပွဲတော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မ...
မခံမရပ်နိုင်အောင် နာလွန်းအားကြီးလို့ ဆံပင်ဖြတ်ပြီး...